Miasa amin'ny tanana, mitantana paompy fanosorana menaka menaka
HL mitantana menaka fanosotra menaka fanosotra paompy
Home/Pumps Grika/HL Manual miasa, mitantana menaka fanosotra menaka fanosotra paompy
Product: HL mitantana menaka fanosotra menaka fanosotra paompy
1. Mifidiana peratra famehezana nafarana, tsy mora ny mitete menaka.
2. Ny toeran'ny tantana dia natao tamin'ny fitaovana manokana, tsy mora vaky.
3. Azo antoka ny asa, ny fiainana fanompoana lava kokoa, ny vidiny mifaninana
HL Oil Grease Lubrication Pump Fampidirana
HL Series menaka menaka fanosotra paompy dia be mpampiasa amin'ny CNC milina, machining foibe, famokarana andalana sy ny milina fitaovana, forging, lamba, plastika, fingotra, fitrandrahana harena ankibon'ny tany, metallurgy, fanorenana, fanontam-pirinty, simika, pharmaceutical, foundry, sakafo sy ny indostria hafa ny mekanika. fitaovana sy ny fampidirana ny fitaovana mekanika rafitra lubrication sy ny fitaovana.
HL Series menaka fanosotra menaka fanosotra paompy dia piston karazana asa tanana, menaka menaka fanosotra paompy. Rehefa sintonina ny tahony paompy, dia hanomboka hiakatra ny tsindry hanosehana ny menaka na menaka voatahiry ao amin'ny efitranon'ny paompy mankany amin'ny toerana fanosorana. Rehefa avoaka ny tahony, ny piston dia handray ny menaka na menaka ao amin'ny efitrano paompy amin'ny alàlan'ny herin'ny lohataona.
Fampiharana HL Series Oil Grease Lubrication Pump:
Ity paompy fanosorana ity dia azo atambatra amin'ny mpaninjara throttle mba hamoronana rafitra fanosorana. Ny fanosorana menaka na menaka dia N20-N1000.
HL Oil Grease Lubrication Pump Ordering Code
(2) HL = HL Series menaka fanosotra menaka fanosotra paompy
(3) 06 = Size 06 Series ; 08 = Size 08 Series
(4) S = Port Outlet tokana ; D = Seranan-tseranana fivoahana roa
(5) 4= Haben'ny mpampitohy varahina 4mm; 6= Varahina connector habe 6mm
(6) Raha mila fanazavana fanampiny
HL06 menaka fanosotra menaka fanosotra refin'ny
HL08 menaka fanosotra menaka fanosotra refin'ny
[email voaaro]2021-11-17T21: 34: 56 + 00: 00
Foot Lubrication Pump FRB-3 Series – Foot Grease Pump, Foot Operation Lubrication Pump